CAN 2019 :: Voailika tsy ho any Maraoka sy Ejypta i Ando sy Toby • AoRaha
CAN 2019 Voailika tsy ho any Maraoka sy Ejypta i Ando sy Toby
Nivoaka ny lisitra misy ireo mpilalao baolina kitra, handrafitra ny ekipam-pirenena malagasy na ny Barea, hiatrika ny fampivondronana farany sy ny lalao ara-pirahalahiana hoentina mizatra ny toe-tany, any Marrakech, amin’ny zoma ho avy izao. Isan’ireo mpilalao najanon’ny mpanazatra nasionaly tsy ho ao anatin’io lisitra io i Ando Rakotondrazaka sy Tobisoa Njakanirina, samy mpila­laon’ny Cnaps Sport.
“Mbola tsy hamoaka ireo mpilalao telo amby roapolo aho raha tsy aorian’ny fihao­nana amin’i Mauritanie. Efatra amby roapolo aloha no hola­zaiko, izay handeha any Marrakech. Hijanona eto an-toerana Rakotondrazaka Ando sy Njakanirina Tobisoa ( Cnaps Sports Itasy). Ireo ihany no niala tamin’ilay lisitra voalohany nisy mpilalao enina amby roapolo”, araka ny fanazavan’i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny ekipam-pirenena, teny amin’ny Urban Futsal Andraharo, omaly. Isan’ireo mpilalao nan­tso­i­na hatrany nanatevina ny eki­pam-pirenena malagasy izy mirahalahy ireo, nandritra ny fifanintsanana nikatsahana ny tapakilan’ny CAN.
Taorian’ ny nahatongavan’i Romain Metanire sy ny namany dia nanomboka voailika tsikelikely ireto vodilaharan’ny Cnaps Sport ireto. Ankoatra azy mirahalahy ireo dia tombanana ho Fabien Boyer , vodilaharana ao amin’ ny Grenoble Foot, any Frantsa no tsy ho isan’ireo hiatrika ny CAN. Efa nisy ny lisitra navoakan’ny gazety boky France Football, izay heverina fa loharanom-baovao avy any amin’ny Kaon­federasiona afrikanina (CAF), tsy nametraka intsony ny anaran’izy telo mirahalahy ireo ao anatin’ny lisitra. Folo andro mialoha ny fifaninanana rahateo no tsy maintsy hande­fasana ny anaran’ireo mpilalao telo amby roapolo hiady ho an’ireo firenena
efatra amby roapolo hifaninana amin’ity fifaninanana kaontinantaly ity. Mpilalao mila ravinahitra avokoa, araka izany, no hiaro ny voninahi-pirenena any amin’ny CAN, ankoatra an-dRandrianasolo Jean Dieudonné (Cnaps Sports Itasy) sy Rakotoarisoa Baggio (Fosa Juniors), izay mbola ao anatin’ny lisitra.
Fahafatesana mpanakanto :: Nodimandry i Donat Rasamimanana, mpamorona andrarezina
Fifidianana solombavambahoaka :: Raikitra ny fampitahana ireo vokatra ataon’ny CENI